China Stainless 17-4PH-SUS630 abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 17-4PH-SUS630
Amagama aqhelekileyo oRhwebo:Ifoto: 17-4ph, S51740, SUS630,0Cr17Ni4Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb,W.Nr./EN 1.4548
I-17-4 engenasici yinto enzima yokuqinisa i-martensitic engenanto edibanisa amandla aphezulu kunye nokuchasana nokubola kwensimbi engenasici. Ukuqina kufezekiswa ngexesha elifutshane, unyango olulula lobushushu obuphantsi. Ngokungafaniyo neentsimbi eziqhelekileyo zemartensitic, ezinje ngohlobo 410, 17-4 luyakwazi ukujijisana. Amandla, ukumelana nokubola kunye nokwenza lula kungenza i-17-4 engenasiphelo endaweni efanelekileyo yokufumana amandla aphezulu e-carbon steels kunye namanye amabakala angenasici.
Kwisisombululo sokunyanga ubushushu, ngo-1900 ° F, isinyithi sine-austenitic kodwa sihamba notshintsho kwisakhiwo sekhabhoni esezantsi ye-martensitic ngexesha lokupholisa ukuya kubushushu begumbi. Olu tshintsho alugqitywanga de ubushushu bwehle bube ngama-90 ° F. Ukufudumeza okulandelayo kumaqondo obushushu angama-900-1150 ° F kwiyure enye ukuya kwezine kunisa ingxubevange. Olu nyango lukhuni lukwacutha ulwakhiwo lwe-martensitic, ukonyusa amandla kunye nobulukhuni.
17-4PH Ukwenziwa kweMichiza
Iipropathi zePhysical 17-4PH
/ G / cm3）
（UJ · kg-1· U-K-1）
Iipropathi zoMatshini ezingama-17-4PH
Ibhola / N / mm2
I-б0.2 / N / mm2
480 ℃ ukwaluphala
580 ℃ ukwaluphala
Imigangatho ye-17-4PH kunye nokucaciswa
Imeko A-H1150, ISO 15156-3, NACE MR0175, S17400, UNS S17400, W. Nombolo./EN 1.4548
17-4PH Iimveliso ezifumanekayo kwiiSekonic Metals
I-17-4PH yeeBhari kunye neentonga
Umatshini wokuwelda we-17-4PH
Intwasahlobo ngokokuzoba kwabathengi okanye imigaqo
Iphepha le-17-4PH kunye nepleyiti
Ityhubhu 17-4PH ingenamthungo & umbhobho welding
Umtya we-17-4PH kunye nekhoyili
Izinto zokubopha i-17-4PH
I-17-4PH ngeendlela zeBolts, izikrufu, iiflanges kunye nezinye izinto ezihamba phambili, ngokweenkcukacha zabathengi.
• Kulula ukulungelelanisa inqanaba lamandla, oko kukuthi, ngotshintsho kwinkqubo yonyango lobushushu ukulungelelanisa Inguqu yemartensite kunye nokuguga
Unyango lwesinyithi esenza isigaba sokuqina kwemvula.
• Ukudinwa kokudinwa nokumelana namanzi.
• Welding:Kwimeko yesisombululo esiqinileyo, ukuguga okanye ukugqithisa, i-alloy ingafakwa nge-ang way, ngaphandle kokutshisa.
Ukuba ufuna amandla e-welding kufutshane namandla esinyithi okuguga aqinisiwe, i-alloy kufuneka ibe sisisombululo esiqinileyo kunye nonyango lokuguga emva kokuwelda.
Le alloy ikwalungele ukubamba, kwaye obona bushushu bushushu sisisombululo sobushushu.
• Nokumelana：Ukuxhathisa umhlwa we-alloy kungaphezulu kwayo nayiphi na into esemgangathweni enzima engenasici, kumanzi amileyo ngokulula athwaxwa ngumhlwa okanye ukuqhekeka. Kwishishini leekhemikhali zepetroleum, ukuqhubekekiswa kokutya kunye nomzi mveliso wephepha onokumelana kakuhle nomhlwa.
Intsimi yesicelo eyi-17-4PH:
• Amaqonga ase-Offshore, indawo yehelikopta, namanye amaqonga.
• Icandelo lokutya.
• Ishishini le-Pulp nephepha.
• Isithuba (blade turbine).
• Iindawo mechanical.
• Imigqomo yenkunkuma yenyukliya.
Egqithileyo Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 904 / 904L
Okulandelayo: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo PH15-7MO
Ibha yokujikeleza eyi-17-4PH
17-4PH Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ibha yentsimbi ye-17-4ph
Insimbi engenasici 17-4ph bar
Yenza ingxubevange R26 evulwa, Isitayile 6B, Isitayile 6, IHaynes 25 Intambo, Ucingo lweWelding, iringi yesitayile,